Ciidamada Dawlada Somaliya iyo kuwa Dalka Itoobiya oo hawl galo ka fuliyay Deegaanada ku teedsan Degamada Baladwayne | maakhir.com
Ciidamada Dawlada Somaliya iyo kuwa Dalka Itoobiya oo hawl galo ka fuliyay Deegaanada ku teedsan Degamada Baladwayne
Baladwayne:- Wararka naga soo gaadhaya magaalada Baladawayne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan inay saaka Bilaabeen Ciidamada Dawlada Somaliya iyo kuwa Itoobiya baadhitaano xoogle oo ay ka wadaan Deeganada ku Hareeraysan Degmad Baladwayne, warka ayaa intaasi ku daraya inay Baadhitaanadaasi aan ilaa haatan cid lagu soo qaban.
Baadhi taanadaasi ay fuliyeen ciidamadu ayaa waxa la sheegay in looga Goleeyahay sidii Gacanta loogu soo dhigi lahaa Kooxa looga shakiyay inay xidhiidh Fiican la leeyahay Al-Shabaab.
Ciidamada Itoobiya ayaa halkaasi ka fuliyay baaritaano xoog leh ,waxa ayna baarayaan Guryaha looga shakisan yahay in ay kooxahaasi ku dhuumanayaa iyo dadka lugu tuhunsan yahay in ay wax ka og yihiin kooxahaasi falalka iyo Abaabulka ay wadaan
Ciidamada DFKMGS & Kuwa Itoobiya ayaa baaritaanadan ku dhaqaaqay hiirtii waaberi waxa ayna ku hubeysanaayeen hubka waa weyn ee saaran Baabuurta Dagaalka iyo sidoo kale askar fara badan oo gashey meelahaasi laga sameynayay howgalladan.
Isku soo duuboo Gobolka Hiiraan ayaa inta badan ayaa waxa lagu Tiriyaa inay ku dhuumaalaysanayaan Kooxo ka ha dhay Maxaaimtii Islaamiga ahaa ee awooda lagu wiiqay Koonfurta Dalka Somaliya.
« Gudoomiyii Hore ee Gobolka Sool oo ay Booliska Puntland ku raad joogaan
Hawl wadeenka Xafiiska isku xidhka Gaadiidka iyo Hay”addaha oo aanu la Kulanay »